Fitaovana hamantarana typography | Famoronana an-tserasera
Mary Rose | | loharanom-baovao
Mety ho asa sarotra ny mamantatra endritsoratra amin'ny maso mitanjaka. Eny, samy manana ny hateviny sy ny endriny ary ny endriny samihafa ny endri-tsoratra tsirairay, ary tsy azo fantarina izy rehetra. Nandritra ny taona maro dia voavaha io olana io tamin'ny famoronana fitaovana an-tserasera izay mahatonga ity asa ity haingana kokoa. Ireo fitaovana ireo dia noforonina mba hamantarana ireo endri-tsoratra amin'ny alàlan'ny sary, fanontaniana ary na URL aza.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra fitaovana maromaro izahay hamantarana typography. Iza no mahalala, mety tsy hitanao ilay tadiavinao fa mahita hafa mety tsara kokoa amin'ny tetikasanao.
1 Fitaovana hamantarana typography
1.1 Inona ny endritsoratra
1.7 Matcherator amin'ny endritsoratra
Nanao safidy izahay Fitaovana an-tserasera 8 izay hanampy anao hamantatra sy hamantatra ireo endri-tsoratra ireo fa raha vao jerena dia tsy mora fantarina. Eto ambany isika dia milaza azy ireo ary manazava bebe kokoa momba azy ireo.
Inona ny endritsoratra
Ny Font dia iray amin'ireo fitaovana an-tranonkala malaza indrindra hamantarana azy. Momba ny a milina fikarohana endri-tsoratra amin'ny alàlan'ny sary, Eny ary, mila mampiditra sary miaraka amin'ny typography tianao ho fantatra fotsiny ianao. Raha vao nampidirin'ny pejin-tranonkala ny sary, dia hampiseho anao andiana valiny mitovy amin'ny endri-tsoratra nampidirinao. Raha tsy nahazo ny vokatra nantenainao ianao, dia foana Azonao atao ny manontany ny fisalasalanao na ny hevitrao amin'ny mpampiasa hafa amin'ny tranokala.
Bowfin Printworks dia serivisy famolavolana endri-tsoratra manokana amin'ny vokatra fanoratra mahazatra, famantarana loharano sy asa fanondroana loharano an-tserasera. Manolotra fampahalalana be dia be izy io, izay ahafahanao mianatra momba ny fanoratana. Ny fitaovana dia hanontany fanontaniana maromaro momba ny endri-tsoratra mba hahafantaran'ny rafitra azy. Ny fanontaniana rehetra dia atao amin'ny pejy tokana. Ilay tompon'ny pejy web ihany no mamaly amin'ny alàlan'ny mailaka raha toa ka misy fisalasalana ianao rehefa mamantatra karazana endri-tsoratra.
Tahaka ny What the Font, ity tranokala ity dia miasa amin'ny alàlan'ny fampiakarana sary miaraka amin'ny endri-tsoratra tianao ho fantatra. Mampiasà katalaogy misy endritsoratra maherin'ny 850000, na ara-barotra na maimaim-poana, manana mpikaroka endri-tsoratra AI ihany koa izy. Ho an'ny sary rehetra ampidirinao ao amin'ny tranokalany, dia hampiseho loharano mihoatra ny 60 izy ireo. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mampakatra sary madio amin'ny lahatsoratra misy ny endri-tsoratra tianao ho fantatra.
Ny fitaovana dia mampiasa AI, rafitra iray hahitana ny typography amin'ny 90% amin'ny tranga. Ny 10% ambiny kosa dia vokatry ny sary tsy dia tsara, izany hoe misy resolution ambany, lahatsoratra mivadika, sns. Ny ataony dia manasaraka ho azy ireo litera ary avy eo dia asehony anao ireo endri-tsoratra izay tena mitovy amin'ny sary nampidirinao, dia asehony anao koa ny rohy mankany amin'ireo pejy ahitana ireo endritsoratra ireo, na hividianana azy na hisintona azy.
Identifont dia natomboka tamin'ny Novambra 2000. Ity pejy ity dia noforonina mba hanomezana fitaovana ho an'ny mpamorona hamantatra ireo endritsoratra na hifidianana ireo endritsoratra tsara indrindra ho an'ny tetikasany. Lasa iray amin'ireo lahatahiry tsy miankina lehibe indrindra amin'ny loharanom-baovao nomerika ao amin'ny aterineto. Ny fomba hamantarana endritsoratra dia mitovy amin'ny ampiasain'ny PrintWorks Bowfin, satria manana safidy fantaro ny loharano inona no tadiavinao ny alalan ' fanontaniana, na dia manana safidy amin'ny mamantatra loharano amin'ny sary na fitoviana.
Ity tranonkala ity dia manome anao ny fahafahana karohy endritsoratra mampiasa sary. Izy io koa dia manolotra endritsoratra maherin'ny 130 azo alaina maimaim-poana. Tahaka ireo pejy web hafa, dia manome anao ny lisitry ny endri-tsoratra izay tena mitovy amin'ilay tadiaviny, na maimaim-poana na karama.
Izany dia google chrome extension, izay manampy hamantatra ny loharanon'ny tranonkala rehetra. Rehefa nametraka azy io ianao, ny hany ataonao dia ny mivezivezy eo amin'ny lahatsoratra tianao ho fantatra, ary ho azonao ny anaran'ny endri-tsoratra sy ny fananana CSS. Haneho anao ny famintinana ny endritsoratra rehetra ampiasaina amin'io tranonkala io. Inona koa Izy io dia hanome anao fampahalalana ara-teknika momba io endri-tsoratra io, toy ny habeny sy ny habeny.
Ity fitaovana ity dia miavaka amin'ny teknolojia matanjaka sy ny endri-javatra miafina, ary mamela anao hampifanaraka ny endri-javatra OpenType. Izy io dia manana endri-javatra fanatsarana tag izay ahafahanao midina any amin'ireo loharano tsy dia mora hita. Azonao atao ny mampakatra sary na mandika ny URL, ny fitaovana dia hampiseho aminao ireo izay tena mitovy amin'ny loharano nampidirinao.
Ao amin'ny catalog interactive, afaka mahita fianakaviana 923 amin'ny endritsoratra maimaim-poana sy maimaim-poana ianao. Azonao ampiasaina amin'ny pejin-tranonkala rehetra, fampiharana finday, famolavolana, sns. Ny endri-tsoratra dia loharano misokatra ary manana kalitao avo lenta. Izy io dia manana motera fikarohana misy safidy maro hahitana ny endri-tsoratra tianao. KOA mamela anao hamantatra loharano iray, ary manambatra modely maromaro mba hahazoana vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Fitaovana hamantarana typography